Ukuze lowo nyaka ilandelana ngendlela kancane ukunqampunwa ibhulukwe ne emaqakaleni nangaphezulu. Kungakhathaliseki isitayela tsvetp, zingabantu kahle umsebenzi ehhovisi, ukuyothenga uhambo nakusihlwa aphoyintimenti nezinye izenzakalo. Zimane nje wadala kokugqokwa kwansuku zonke bese kuhlanganiswa inchumbi kahle izinsimbi ezahlukene. Inkomba - ukuwathola. Ngokwesibonelo, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi hlobo luni izicathulo ukugqoka, ibhulukwe iDemo kungaba, futhi yini - akukho. Catch Ukukhetha kwethu ewusizo ekukhetheni nezicathulo ezifanele.
Kuyini ibhulukwe ekhethekile mfushane?
ibhulukwe iDemo, nebhulukwe noma capris - model nge obuphelele kuya maphakathi no-ithole noma cha ukufinyelela efinyelela emaqakaleni. Zingaba Friend-kufaneleka, ezibanzi, eduze kufaneleka, self-anemibala, ehlotshiswe imivimbo nofana amaphetheni anikelweko. imikhiqizo enjalo kungahluka impahla kuyiphi ithungwe. Ngokwesibonelo, kungaba ukukhanya kakhulu ehlobo capris noma rougher ekwindla ibhulukwe.
Nokho, kungakhathaliseki ukuthi isitayela, ezifana ibhulukwe iDemo babe Isici esisodwa esifanayo. Bona kahle ukugcizelela kancane yathwala ingxenye engezansi imilenze sowesifazane, okubonisa sengozini yayo kanye neziphathelene nezocansi.
Ukuhlola umlando encane
Eyokuqala imfashini izingubo for girls ngesimo ibhulukwe iDemo uvele kwaba ngemva kwezikhathi zokulotshwa impi. Ekupheleni kweMpi Yezwe II, ubufazi nokungalondeki eyayivamile ngendlela ladies 'mnene, kwaba ziphoqa kunanini ngaphambili.
Kulokhu, kahle abenyukela umbono ukwakha ibhulukwe emifushane ayisesemikhulu, kunzima ukusho. Abanye bathi lezi zinto ukuze Italian wengqephu Emilio Pucci, kubikwa ukuthi wanikeza ibhulukwe behlonipha esiqhingini sakhe abathandwa Capri. Abanye ngokuqiniseka ngokuthi igama umklami indodakazi usozimboni abacebile Sonia De Lennart.
Ukubhekisisa imininingwane bese ubuka nizithibe zezinto
Lapho ekhetha capris jini noma Classic style oyisibonelo ubude 7/8, kufanele wenze kanjalo ngokucophelela okukhulu. Futhi zonke ngenxa ibhulukwe okungalungile abakhethiwe kungonakalisa ngokuphelele isithombe sakho. Ngokwesibonelo, abesifazane abasebasha kwesiqu encane, bangakwazi zibukeke unciphise imilenze kakade eside kakhulu. High ngangokunokwenzeka, kunalokho, ukuze ujike ku osemusha osenesikhathi eside abadliwa ibhulukwe lakhe.
Ukuze ugweme izikhathi ezingemnandi ngesikhathi Ukukhetha ibhulukwe, sinake oyisibonelo okhalweni okusezingeni eliphezulu. Zingase zibekwe, isib, Denim Capri ibhulukwe noma izindwangu zemvelo. Futhi, cishe emhlabeni wonke kubhekwa isibonelo esinjalo, ogama engagunyaziwe yayizovela.
Ukugqoka lezi ibhulukwe, kungenzeka ukuba zibukeke ukunciphisa ngalé omkhulu futhi ezinkulu. Futhi okuphambene nalokho - emzimbeni yabesifazane engcono kakhulu yokugwema imfashini ibhulukwe likhulu kakhulu noma eziqongweni. Babonakala ukunyusa ivolumu, ngakho ngeke ivumelane intombazane enhle.
Ubani futhi yini ngeke ivumelane capris?
Noma yimuphi abagqoka, njengoba sishilo, kumele kuhambisane sibalo. Ngokwesibonelo, emincane futhi ezikubambayo Capri ibhulukwe ngeke abonakala amahle amantombazane nabesifazane bazo zonke osayizi. Yilokho nje kufanele ube ngokucacile kholwa ubuhle ezinyaweni zakho, ngoba onobuhle ezifana ukulingana kahle ekupheleni emzimbeni futhi ukugqamisa bonke Curves.
Lokho okubizwa ngokuthi i ibhulukwe-amasoka bushelelezi izibalo convex kanye abesifazane kufanelekile izinkalo omangalisayo. Kulesi simo, zama ukukhetha ibhulukwe ne umbala omnyama phezu nokukhanya - phansi. Too mncane, ungakwazi ngokuphepha ukhetha umuntu oyisibonelo nge top omkhulu embozwe emphethweni eziningi.
Female isilinganiso kanye wezemidlalo kufanelekile Capri ibhulukwe-amapayipi, ibhulukwe, okusikhumbuza leggings, ibhulukwe ngisho nge nebhulukwe okuncane. Futhi uma kukhethwa ibhulukwe ucishe ecacile, yilokhu ukugqoka Capri ibhulukwe uhlala mbuzo.
Kusukela sizogqokani ibhulukwe emfushane?
Ngakho, ake sithi wena wacosha ibhulukwe stylish ukulandisa okufutshane. Kusukela lokho ukugqoka kwabo? Lokhu, futhi, kuzoncika izici sibalo. Nebafati ukwenzela ukungena okuncane kakhulu noma lokugijima ungakwazi afake noma yiluphi uhlobo t-shirts kanye ithangi eziqongweni, jackets esifushane futhi Boleros, ngokuvula okhalweni ezikhangayo bese ucindezela.
Ladies nge Ngokugobekile noku kangcono uncamela okuxekethile esinamathelayo izikibha. Futhi jackets efanelekayo ukumboza indawo hip.
slacks esincishisiwe ukuhlanganisa kahle blouses zakudala nenhle, namabhantshi ngaphansi ibhande yakho, jackets. Futhi uncoma ukuba banake umbala Clothing Range. Ngokwesibonelo, ihhovisi kuyafaneleka ngaphezulu ezinombala ofanayo izingubo, okunzima, classical hhayi kakhulu imibala esidonsa amehlo. Ukuze imikhosi top ezinemibala egqamile xaxa kanye namanzi ngempela efanelekayo. Futhi ungakhohlwa ukuqinisa isithombe yayo bamba emincane noma isikhwanyana esincane phezu kwehlombe lakhe.
Yini izicathulo ukugqoka, ibhulukwe emfushane?
Ayikho imininingwane ezingabalulekile kangako ngendlela evumelanayo is uqondanise kahle izicathulo. ukusebenza emahhovisi Slim kanye okusezingeni eliphezulu abesifazane Sisikisela egqoke capris izicathulo isithende isilinganiso. Kungaba izimbadada amancane platform izicathulo esitalini isithende isikwele noma kancane oyindilinga. Nebafati belulekwa ukuba ukhethe medium Yakha amaphampu noma ballet emafulethini. Ukuze abesifazane nge shape curvy izicathulo efanelekayo Umumo nenhle futhi amaphethini zakudala.
Yini izicathulo ukugqoka ibhulukwe intsha?
Ubuhle ibhulukwe emfushane ukuthi bevula iqakala. Nokho, akubona bonke of them are okwenyanga kahle. Futhi ngabo uhlobo isinxephezelo nokususa ukugcizelela babe nekhono ukukhetha Izicathulo ezifanele. Ngokwesibonelo, intsha ukunqampunwa ibhulukwe kukhona izicathulo ephelele nazimbadada izicathulo ezincane sesithende esiphezulu.
Ngesikhathi esifanayo usayizi ehloniphekayo amantombazane kufanele sigweme amapulatifomu okwe ugandaganda amathe. Uma kungenjalo, uzobonakala isisindo sibalo aphange wonke isithombe. Akufanele kube pin ezihlukunyeziwe izacile.
Khumbula ukuthi Isithombe kumele sibe ngokuvumelana. Ngakho-ke kungcono ukukhetha izicathulo nge isithende kancane, hhayi obukhulu kakhulu noma ukuzaca. Konke kufanele kube ngokulinganisela. Kodwa ke onjani izicathulo ukugqoka, ibhulukwe iDemo intombazane Skinny noma owesifazane emncane isilinganiso?
Amantombazane of Imizimba evamile abagqoka ngokuphepha stilettos. Ngalezi izicathulo fashion nezimbadada ukuhlanganisa kahle Friend ibhulukwe-amapayipi, kancane lwavutha nebhulukwe phansi ngisho ibhulukwe jini.
Yini wesilisa cut ibhulukwe kuhlangene?
Uma ukhetha umfuziselo cut wesilisa, ukhululeke ukuthenga izimbadada zakhe noma izicathulo ngaphandle spikes. Kungaba loafers, amabhuzu ngisho Lofer. Lemisebenti ingaphindze igqoke nge-ballet emafulethini nezicathulo flat.
Yini ukugqoka ibhulukwe isitayela ngqo?
Capri Straight nge eziqongweni ebanzi ekahle ngokudala isithombe ngesitayela ezikhululekile. Ukuze wenze lokhu, badinga ukuba igqoke nge moccasins, amateki kanye amateki. Ukuze jeans zakho noma Pantaloons ekahle ukunqampunwa jackets noma pullover eside kungekho izinkinobho.
Indlela ukugqoka ehlobo capris?
Khanyisa futhi njengabesifazane Capri - lesikahle uma udala fresh entwasahlobo noma ekwindla imicibisholo. Abagcini ngokujabulela bheka stylish kakhulu, kodwa futhi ukugqoka kwabo uyintokozo. Nge iDemo slacks, culottes noma ibhulukwe-Palazzo elingangena ngokuphepha sihlanganise iyiphi izicathulo.
izingubo Trendy for girls ngempumelelo kubukeka kuhlangene izimbadada zakudala noma izicathulo, amabhuzu amagejambazo iqakala amabhuzu nge uzwane ovulekile futhi isithende. Aphathelene kule sizini amateki, amateki nazimbadada, izilwi.
Ngoba lezi ibhulukwe cishe jikelele, lapho ekhetha izicathulo kufanele aqondiswe ukunambitheka kwabo izintandokazi ancike izici sibalo.
Amathiphu ambalwa for ozinikezele futhi abathandi Capri
Uma ungazi ukuthi hlobo luni izicathulo ukugqoka nge ibhulukwe esifushane, banake isitayela izingubo. It is ibuye Kunconywa ukuba izame izicathulo ezahlukene. Ukuze wenze lokhu, nesibuko esikhulu phansi futhi yanjalo ukugqoka izicathulo izitayela ezahlukene, nge isithende futhi ngaphandle. Uma eduze nawe okwamanje namanje umngane, yena wathokoza aveze owakhe umbono inhloso.
Futhi uma kukhona muntu? Ochwepheshe ukweluleka ukuhambisa ibanga elifushane aphinda ukuza eduze kwesibuko. Zihlole bevela kuzo zonke izinhlangothi. Linganisa indlela elivumelana waphenduka indlela yakho. Ingabe ukwenza isithombe sakho qinile esifushane noma side kakhulu.
Uma ungeyena namaqakala enhle kakhulu, kutuswa ukuba bagqoke nezimbadada noma izicathulo wayibhinca obukhulu emhlabeni ngezinyawo. Noma makudle ibhulukwe eside. Ungazama futhi bayeke ukugxila kusukela izinyawo, isibonelo, endaweni esifubeni. Ukuze wenze lokhu, kahle kuya amahembe ongaphakeme-cut noma iphuma out. Kodwa nabo futhi kuhle ukuba overdo it.
Ngokuqondene umbala, bese ukhetha izicathulo noma amathoni zakudala hlangothi. Ngezinye izikhathi kunengqondo ukugqoka ithafa ensundu, peach noma esakhe cotta nezimbadada. Lapha konke kuzoncika umbala Capri futhi wasebenzisa phezulu wena.
Yiba zokudala, UCWANINGO - bethu futhi sibe bahle njalo!
Imoto ezebiwe kunazo eMoscow neRussia